I-China Inenzuzo Yiwu Toy Toy Ivenkile yeNtengiso yeNtengiso esona siKhokelo siyiNtloko ekufuneka uyazi: Umbutho wabathengisi
Inzuzo ye-Yiwu Toy Ivenkile yeNtengiso yeNtengiso esona sikhokelo siyiNtloko ekufuneka uyazi
Ngaba uyafuna ukungenisa iithoyi ezinenzuzo ezivela market Yiwu, kodwa ungazi ukuba ungaqala njani? Namhlanje ungafumana esona sikhokelo sentengiso ye-Yiwu esona sikhokelo kwaye uphuhlise ngokulula ishishini lokudlala. Masiqalise ukuhlola:
1. Amagqabantshintshi e-Yiwu Toy Market
2. Iimveliso ezikhoyo kunye nemvelaphi yazo kwi-Yiwu toy market
3. Kutheni ukhetha i-Yiwu Toy Market
Njengomzi mveliso onamandla kwi-Yiwu, iithoyi zithengisiwe kumazwe angaphezu kwama-200 nakwimimandla. Izibalo zibonisa ukuba i-60% yezikhongozeli ezithunyelwa ngaphandle ezivela kwi-Yiwu ziqukethe iithoyi. Ukuba ufuna ukutyelela i-Yiwu Toy Market, nceda ulumke ukugungxula iholide yoMthendeleko weNtwasahlobo. Ngokwesiqhelo iiyure zomsebenzi ziqala ngo-09: 00 ukuya ku-17: 00, kodwa ivaliwe kangangeentsuku ezili-15 ngexesha loMnyhadala weNtwasahlobo.
Imarike yeToyi yeemveliso ezikhoyo kunye nemvelaphi
1. Le ntengiso yehoseyile ineemimandla ezine, isithili ngasinye sinezitalato ezili-12. Ezi zilandelayo ziindidi ezahlukeneyo zeendawo zokudlala:
Indawo B: Amathoyizi aphambili, inombolo yomnquba ingama-601-1200;
Indawo C: iithoyi eziphindaphindayo, izinto zokudlala ezinokuqhekeka, iithoyi zepati, izinto zokudlala zeplastiki, inombolo yomnquba yi-1201-1800;
Indawo D: iithoyi zeplastiki, izinto zokudlala zombane, izinto zokudlala ezenziwe ngomthi, inombolo yomnquba yi1801-2400;
Umda E: Iithoyi zeplastiki, iithoyi eziqhelekileyo, iithoyi zezipho, iithoyi zepati, inombolo yomnxeba engu-2401-3000;
2.I-Yiwu Toy Ivenkile yokuthengisa imarike iqokelela inoveli kunye nezinto zokudlala ezikumgangatho ophezulu ezivela kulo lonke ilizwe lase China. Iinto zokudlala eziveliswe kwi-Yiwu ikakhulu zibandakanya izinto zokudlala ezincinci zeplastiki, iithoyi eziphambili kunye nezinto zokudlala ezinokuthelekiswa. Isiseko semveliso siseYixi Industrial Park. Uninzi lwezinto zokudlala eziphezulu ezivela kwimarike yaseGuangzhou okanye eChenghai. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngeendawo zemveliso yeethoyi zaseTshayina, nceda ucofe: Amashishini amaTshayina eToys amancinci.
3. Abathengisi abaninzi bathanda ukudlala iimodeli ezintsha okanye ezithandwayo ngaphandle komnquba okanye eholweni, kwaye babonisa iimveliso kangangoko kunokwenzeka. Ukwahlulwa kwemakethi yentengiso ye-Yiwu kulungile, kwaye unokukhangela ngokulula iimveliso ezivela ngaphandle. Oku kulandelayo yimifanekiso yemveliso yentengiso yeYiwu:
Izinto eziluncedo zeYiwu Toy Market
1. Ungazifumana zonke izinto zokudlala ozifunayo apha, kubandakanya iithoyi zebhloko zokwakha, iithoyi zecapsule yendawo, izinto zokudlala ezijiyileyo, iithoyi zedinosaur, iithoyi zemfundo, izinto zokudlala zabantwana, iithoyi zeTPR, njl
. kwintengiso ye-Yiwu yentengiso, enje nge: ibhalansi isithuthuthu kunye nokusika. Veki nganye (okanye yonke imihla) kukho uyilo olutsha kwintengiso.
3. Ubuncinane be-odolo yobungakanani buphantsi, kwaye ubuncinci be-odolo ubuncinci buphantsi njengebhokisi enye / ixabisa i-200 yeedola. Ukuhanjiswa simahla (kwigumbi lokugcina izinto le-Yiwu) kuhlala kufuna umthengisi ofanayo ukuba abonelele ngeebhokisi ezi-5-10 ze-CTN. Eyona nto ibaluleke kakhulu lixabiso eliphantsi, elilungele naliphi na inani labathengi balo naluphi na uhlobo.
Uyithenga njani i-Yiwu Toy Market
1. Ukuba ufika kwi-Yiwu Toy Market uzokukhangela iimveliso buqu, nceda uqiniseke ukuba unxiba izihlangu ezikhanyayo kunye neempahla ezintle. Ngenxa yokuba imarike yokudlala ye-Yiwu inkulu, kunokuthatha usuku ukukhangela. Ungakhangela ibhloko ngebhlok ngokwenombolo yomnquba. Qaphela: Ngenxa yomahluko wamaxabiso phakathi kwamadokodo, ungangcono uthelekise amaxabiso angaphezulu kwabathengisi abathathu, kwaye unike ingqalelo ngokuthelekisa umgangatho wokuqonda ukuba ngumzi-mveliso. Imarike yokudlala ye-Yiwu ikwanazo nezinto zokudlala eziselugcinweni, ezihlala zitshiphu kakhulu kodwa zikumgangatho ofanayo. Kuhlala kuthatha ixesha elininzi ukufumana ezo mveliso. Ngokwesiqhelo akunakwenzeka ukuba ufumane iisampulu simahla eminqubeni, kuba uninzi lwazo lunesampulu enye kuphela yokubonisa kwaye kufuneka zigqithiselwe zisuka kumzi-mveliso. Ixabiso lesampulu lihlala liphezulu kunexabiso elithengiswayo.
Zonke iivenkile zinomthengisi omnye ubuncinci. Ukuba unomdla kwiimveliso zabo, ungabuza malunga neemveliso zabo kwaye banokubazisa. Ungayibiza "laoban", uyibize "Lorban", kwaye akukho bunzima ekucaphuleni okanye ekujonganeni nemibuzo elula ngesiNgesi. Ungalibali ukugcina irekhodi emva kokuba ufunde ngexabiso, ukupakisha, kunye ne-MOQ. Kwiivenkile ezinomdla, unokucela amakhadi abo oshishino kunxibelelwano lwamva. Ukuba ubusebenzisane ne-arhente yokuthenga ye-Yiwu, emva kokuthatha isigqibo malunga nemveliso oyifunayo, baya kukunceda ukuphatha zonke iinkqubo. Nceda ufumane i-visa ngaphambi kokundwendwela iTshayina.
2. Ukuba awukwazi ukuza e-China, unokukhangela iimveliso zentengiso ye-Yiwu ngamajelo e-intanethi, okanye ukhangele iiarhente zokuthenga ze-Yiwu ezikuncedayo. Zininzi iindidi zabathengisi kwi-Intanethi, kwaye kungcono ukuqinisekisa ukuthembeka kwabo ngaphambi kokufaka iodolo. Inkqubo epheleleyo yokungenisa evela e-China, nceda undwendwele:
Ungabakhetha njani abathengisi abathembekileyo
Jonga umgangatho kunye nokucwangcisa ukuThumela
Ukulandela kunye nokufumana iimpahla
Funda imigaqo yorhwebo esisiseko
Ngubani onokukunceda ngokulula ukungenisa
iSellersunion yeyona nkampani inkulu yokufumana sourcing agent in Yiwu. We can help you quickly find a reliable manufacturer with the lowest price, follow up production, ensure quality, and deliver door to door. You can also have your own customized private label products to further differentiate yourself from competitors. If you can’t come to Yiwu, our online showroom allows you to choose Chinese toys online. We can also provide live broadcast of Yiwu toy market to see products more intuitively. Save your time and cost, ungaqhagamshelana nathi ngoku.
Ixesha Post: Feb-03-2021